Ahịa Ahịa: Ọdịdị nke Ahụhụ Unboxing | Martech Zone
Fọdụ n'ime unu nwere ike ịgbanye anya na nke a, mana oge izizi m hụrụ ngwugwu ngwaahịa a dị ịtụnanya bụ mgbe ezigbo enyi zụtara m AppleTV. Ọ bụ ihe mbụ Apple ngwaọrụ m natara na ahụmahụ o yikarịrị ka o mere ka m ọtụtụ Apple ngwaahịa na m nwere ugbu a. Otu n'ime ahụmịhe na-enweghị atụ na-enweghị atụ bụ MacBook Pro mbụ m. Igbe ahụ zuru oke ma MacBook guzobere n'ụzọ zuru oke ka ị na-alaghachi nkwakọ ngwaahịa ahụ. Ọ na-ele anya ma nwee mmetụta pụrụ iche… nke mere na m na-atụ anya inweta MacBook Pro ọhụụ ọ bụla afọ ole na ole (agafeela m ugbu a).
Jaa nke a na laptọọpụ m zụtara n'afọ gara aga. Ọ baghị ọnụ Laptọọpụ Laptọọpụ Windows dị oke ọnụ mana enwere m oke ịtụnanya mgbe ha wepụtara ya. A na-etinye ya na kaadiboodu na-acha aja aja ma jiri ike kpuchie ya na akpa ma tinye ya na igbe ọcha, mkpa. Ọ bụ ezie na laptọọpụ mara mma, ọkpọ ahụ apụtaghị ihe ọ bụla n'echiche. Ọ bụ eziokwu na-akụda. Kasị njọ, ọ mere ka m chee ma ụlọ ọrụ na-esote laptọọpụ na-achọ ịmasị m ma ọ bụ naanị chekwaa ego ole na ole na nkwakọ ngwaahịa.
Ndị ahịa taa na-apụ na ahụmịhe ịzụ ahịa ma na-aga n'ihu site na afọ ojuju ozugbo enwere mgbe ịzụrụ na ụlọ ahịa. Nke a bụ ihe kpatara ị ga-eji lekwasị anya n'akụkụ ndị fọdụrụ n'ichepụta akara gị na ndị ahịa. Eleghi anya ileghara ahụmịhe unboxing anya mgbe ị na-atụle mmetụta ya na afọ ojuju ndị ahịa. Jake Onyekwere, Red Stag Mmezu
Anyị emeela ụfọdụ ntinye maka ndị ahịa anyị iji tinye ngwaahịa ecommerce ha kemgbe ọtụtụ afọ. Otu bụ kaadị ekele dị mfe na mbelata ego nwere ike ịdaba na njigide ka mma. Onye ọzọ bụ kaadị nkekọrịta mmekọrịta nke nwere akaụntụ mmekọrịta niile nke ụlọ ọrụ ahụ na ya na hashtag ịkekọrịta foto nke usoro ịntanetị. Mgbe ọ bụla onye ahịa kesara iwu ha, ụlọ ọrụ ahụ kesara ya site na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọ bụ ụzọ dị mma iji mata ndị ahịa ha n'ịntanetị yana ịnweta ụfọdụ mmekọrịta mmekọrịta iji dọta ndị ahịa ọhụrụ.
Nke ahụ bụ otu n'ime ebe ndị elebara anya Red Stag Mmezu ekere òkè dị ka usoro kachasị mma na ozi ha, Mmebe nke Ahụmahụ Unboxing zuru oke. Ndị ọkachamara nyochara ihe na-arụpụta ọtụtụ mmetụta na ndị ahịa, gụnyere:
Igbe ahụ - mputa ihe eji eme igbe, ihe nkpuchi, na igbe dị n'ime.
Dịanyā na mbukota Ihe - akwụkwọ mpempe akwụkwọ, akwụkwọ mpempe akwụkwọ, na ngwugwu ngwongwo.
Ngosipụta Ngwaahịa - ịkọwapụta ngwaahịa bụ isi na ịchekwa ngwa na akwụkwọ.
Ga N'elu na Niile - na-enye ikpe n'efu, gụnyere akara nloghachi, na ịkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Mkpa nke ntinye - gbakwunye ederede ahaziri iche, na ahịa ahịa nke na-akpọsa ngwa ahịa na nkwalite ndị ọzọ dị mkpa.
Ihe omuma ihe omuma a na-achota nke obula ma nye ndi ozo ndụmọdụ banyere nsogbu ndi ozo, tinyere igbe ndi buru ibu, pean pean, ihe mgbagwoju anya, na teepu adighi ike.
Tags: mmezuahụmahụ ngwaahịangwaahịa ahịaRed Stag Mmezuunboxing